မြန်မာပြည်နည်းပညာနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အနာဂါတ်အလားအလာများ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မြန်မာပြည်နည်းပညာနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အနာဂါတ်အလားအလာများ (၂)
မြန်မာပြည်နည်းပညာနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အနာဂါတ်အလားအလာများ (၂)
Posted by naywoon ni on Jan 25, 2013 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 13 comments
Facebook အကြောင်းမပြောခင် g-talk အကြောင်းကိုပြောရရင် ပိုပြီးသဘာဝကျမယ်ထင်တယ် …။ ဂျီတော့ဆိုတာက လူတိုင်းသုံးနေကြတာပဲ….။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့က password မပြောင်းတတ်ဘူးတဲ့…။ ကိုယ့်အကောင့်ရဲ့ recovery account ကဘာလဲမသိဘူးတဲ့ ….။ ဂျီတော့မှာ အကာင့်အက်ရုံ စကားပြောရုံ ကြူ ရုံ သက်သက်လေး သုံးတတ်ကြတာ ….။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက မေးလ်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ လာလာမေးကြတာပဲ…။ ခက်ဖူးလား …..။ https://mail.google.com/mail/?tab=wm ဒီလိပ်စာကိုအမြဲ ဆောင်ထားပေးနေရတာကအလုပ်တစ်ခု….။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ က အကောင့်ပျောက်ရင် ပြန်ရှာမနေတော့ဘူး …။ နောက်တစ်ခု ရှာသုံးလိုက်တာပဲ…။ အဲဒိထဲမှာစိတ်ညစ်စရာ အကောင်ဆုံးက အကောင့်တစ်ခုကို နှစ်ယာက် ဒါ့ထက်ပိုပြီး သုံးလေးယောက် အထိ ဝေမျှ သုံးနေကြတာပဲ…။ တွေ့နေရတာကတော့ ဒီအကောင့် ဒီအကောင့်ပဲ ဒါပေမယ့် တစ်ခါလာ တစ်ယောက်ပြောင်း နေတယ်…….။ မယုံမရှိနဲ့ မျက်စေ့ရှေ့မှာကို အဲဒိလို အကောင့် တစ်ခုထဲကို နှစ်ယောက်ဖွင့်ပြီးပြောနေတာ ကြုံရဖူးတယ်…။ သဘောကတော့ အကောင့်တစ်ခုရဲ့ နစ်နိမ်းကို တန်ဘိုးမထားတာပဲ…။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မမြင်မတွေ့ရပဲ လေထဲမှာပြောနေကြတဲ့စကားတွေ စက်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့လေထဲမှာပဲပျောက်သွားမှာပဲလို့ လွယ်လွယ်ကူကူ မေ့ပျောက်နိုင်စွမ်းလည်းရှိကြပါရဲ့…။ ဒါဆို ဘာလို့ အချိန်ကုန်ခံ လူအညောင်းခံ ငွေကုန်ခံပြီး အင်တာနက်ဆိုင်လာကြသလဲ မေးရင် ရန်အတွေ့ခံရမှာသေချာတယ်…။ မြန်မာပြည်က အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေက အကောင့် တစ်ခုထက်ပိုပြီး ရှိတဲ့သုံးနေတဲ့သူတွေများတယ်…။ အကောင့်တစ်ခုထဲကိုပဲစွဲစွဲ မြဲမြဲ တန်ဘ်ိုးထားပြီး သုံးတဲ့သူက လက်ချိုးရေလို့တောင်ရလောက်တယ်…။ ပြောချင်တာက အင်တာနက်သုံးတာကို ရည်ရွယ်ချက် မရှိပဲ သူများသုံးလို့လိုက်သုံးတယ်…။ လူအမြင်မှာ တင့်တယ်တယ်ထင်လို့သုံးတယ် ….။ ဒါကိုပေါ်ပြူလာဖြစ်လို့သုံးတယ်…။ တစ်ချို့ရှိသေးတယ်..။ ပျင်းလို့ သုံးတာတဲ့…။ ဂျီတော့ပေါ်ကနေ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ထွေရာလးပါးပြောနေရတာကိုက အပျင်းပြေ သဘောပဲတဲ့….။ အနားရှိနေရင် ဖနောင့်နဲ့လှိမ့်ပေါက်လာချင်အောင်ပြောလိုက်တဲ့စကား …။ နောက်အဲဒိအကောင့်နဲ့စကာမပြောတော့ဘူး…။ ဟုတ်တယ်လေ…။ သူ့ကိုပျော်တော်ဆက်နေတယ်များအောက့်မေ့နေသလားမသိဘူး…။ ကိုယ့်မှာ စာအုပ်တွေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်တာ …။ သိမ်းချင်တာ …။ ရှယ်ယာပေးချင်တာ …။ ကိုယ်လိုချင်တဲကစာအုပ်တွေ လိုက်ရှာနေရတာ မှန်တာပြောရရင် တစ်နေကုန်ထိုင်နေလည်း စကား တစ်လုံး ပြောဖြစ်ချင်မှပြောဖြစ်တာ ….။ စာအုပ်လေးငါအုပ်သိမ်းမသွားနိုင်ပဲ ခုံက ထသွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး…။ ဒါကြောင့် လိုင်းနဲနဲကျသွားတာနဲ့ ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေပြန်ဖတ်…။ ဒီကြားထဲ လေထဲပြောပြီး လေထဲပျောက်မဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြော နေရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အလုပ်က ဘာမှပြီးမှာမဟုတ်ဘူး…။ စာရေးချင်တာလေးကိုလည်း ဒေါင်းလုပ် စောင့်နေတုန်း စိတ်ကူးလေးပ်ါလာရင်ရေးလိုက်ချင်သေးတယ်…။ တစ်ယောက်ယောက်က အားကိုးတစ်ကြီး စာအုပ်ရှာခိုင်းရင် ရှာပေးရသေးတယ်…။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်ဆိုရင် ကိုယ်ပါလိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထား …။ အဲဒိတော့ ဂျီတော့ပေါ်မှာ အာရုံမထားဖြစ်တာကြာပြီ….။ အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်ကာစကတော့ သူလိုကိုယ်လိုပါပဲ…။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ မတူတာက နေ၀န်းနီက အသက်လေးဆယ်ပြည့် အမှတ်တစ်ရ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့သူ …။ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာတာကလည်း တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာခဲ့တာ ….။ ရည်ရွယ်တာက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်တယ် …။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စာရေးချင်တယ်….။ ငယ်စဉ်ကတည်းက စာရေးတဲ့ပိုးက အသက်လေးဆယ်ရောက်တဲ့အထိ မသေသေးဘူး ဆိုတော့ ….။ ဒါကိုပဲ တစ်စိုက်မှတ်မှတ် နည်းလမ်းရှာနေတာ ….။ သူများတွေလုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ် တွေလိုက်လေ့လာတယ် …။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တယ်…။ အဲဒိမှာရေးထားတာတွေလိုက်ဖတ်တယ်…။ ချက်တင်ကိုလည်းလက်မလွှတ်စေရဘူး…။ အဲဒိအချိန်မှာ အနီးကပ်သင်ပြမဲ့သူဆိုတာ တစ်ယောက်မှမရှိဘူးအဟုတ်…။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သာသုံးနေကြတာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ သူတို့မှစိတ်မ၀င်စားတာ ….။ အဲတော့ စမ်းလုပ် ….။ ဖြစ်တာဖြစ် ပျက်တာကပျက် …။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဘလော့ဂ်စပေါ့ တစ်ခုတော့ ဖြစ်သွားတာပဲ…။ အဲဒိတော့ နေ၀န်းနီရဲ့ ဆရာက အွန်လိုင်းပေါ်က ၀က်ဆိုဒ်တွေ ….။ တစ်လောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ညီက အင်တာနက် ပညာသင်ချင်ပါသတဲ့…။ ဒီတော့ တစ်ခု ပြန်မေးလိုက်တာ က “ မင်းကဘာကိုသိချင်တာလဲ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ” လို့ အဲဒိမှာ သင်ခိုင်းတဲ့သူခမျာ ယောင်ဝါးဝါး ….။
“ ငါက သင်မပေးချင်တာမဟုတ် သင်ပေးချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ငါက သင်တန်းနဲ့ဘာနဲ့ တက်ပြီး တတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ဒီတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မင်းဘာသိချင်တာလဲ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ အရင်ဆုံး Target တစ်ခု သတ်မှတ် ကျွန်တော်ကတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘာကို လေ့လာချင်တာ ဘာကိုလုပ်တတ်ချင်တာ ကိုယ့်ဖာသာပြန်စဉ်းစား …။ တစ်ကယ်တော့ အင်တာနက် ဆိုတာက အကျယ်ကြီး ….။ အတတ်ပညာတစ်ခုထဲကို လက်တစ်ဆုံးနှိုက်ယူရုံတင်မဟုတ်ဘူး နားရွက် ရွံ့ပေအောင်နှိုက်လို့ရတယ်…။ အဲဒိထက်နက်ရှိုင်းချင်ရင် နောက်ဖင်ဘူးတောင်ထောင်အောင်နှိုက်ယူမကုန်ဘူး ဟုတ်လား”
ဟုတ်တယ်လေဗျာ ….။ အဲဒါက တောရွာတွေမှာ နေဖူးတဲ့သူတွေဆိုပိုသိတယ်…။ လယ်ကန်ဇင်း က ဂဏန်းတွင်းတွေကိုကလေးတွေနှိုက်ကြတာ တွေ့ဖူးမှာပေါ့ ကိုယ်တိုင်လည်း နှိုက်ခင်နှိုက်ဖူးမှာပဲ…။ တွင်းကနက်တဲ့အခါကျတော့ လက်တစ်ဆုံးနှိုက်ရင်းနဲ့ အားစိုက်နှိုက်လိုက်တော့ ပုခုန်းနဲ့နီးနေတဲ့ နားရွက်က ရွံ့ပေသွားတာပဲ အဲဒါနဲ့မရဘူးဆိုရင် အားပိုစိုက်ရင် ဖင်ဘူးတောင်းထောင်သွားတာပဲ…။ အဲဒိတော့ အဲဒိဂဏန်းတွင်းနှိုက်ရတာနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က ပညာရပ်တွေလ့လာရတာက တစ်ခြားသူတွေအတွက်တော့ မသိဘူး …။နေ၀န်းနီအတွက်တော့ သဘောချင်းခပ်ဆင်ဆင်ရယ်……..။ ဂဏန်းတွင်နှိုက်ရတာလည်း ကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ်အတိုင်းအဆ ရှိတယ်…။ အင်တာနက်ပေါ်မှာကလည်း ဘာသာစကားအခက်အခဲနဲ့ နည်းပညာ အခက်အခဲကို ကိုယ့်အားနဲ့ကိုယ်ကျော်ဖြတ်လာရတာ ……။ အားစိုက်လေ နားရွက်ရွံ့ပေလေ……။ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်သွားလေပဲ…။ ဂျီတော့ အကြောင်းပြောနေရတာနဲ့ အဓိကပြောမယ်ဆိုတဲ့ Facebook အကြောင်းမရောက်တော့ဘူး….။ တစ်ချို့က အင်တာနက်ဆိုတာကို ဂျီတော့တစ်ခုထဲနဲ့ ရောချချင်ကြတယ်….။ ဂျီတော့ထဲက ဟာတွေ အဟုတ်ထင်နေကြတယ်…။ ရှိသေးတယ်…။ ကြုံဖူးတာလေးဖောက်သယ်ချပါရစေဦး….။ ဂျီတော့ပြောရင်လိုက်နာရမဲ့စည်းကမ်းချက်များတဲ့ ဘယ်သူကထုတ်သွားသလဲမသိဘူး….။ အဲဒါတွေက
၂။ နေရပ်လိပ်စာအမှန်မပြောရတဲ့…။ ဖုန်းနံပါန်ပေးတာအပါအ၀င်
၃။ ကိုယ်ပုံရိပ်ကို အမှန်မပြောရတဲ့
၅။ ကိုယ့်အလုပ်အကိုင်အမှန်မပြောရတဲ့…။ ကဲ ဂျီတော့ထဲက ဟာတွေ အဟုတ်ထင်ချင်တဲ့သူထင်ကြပေရာ့….။
တစ်ချို့ကလည်းဖေ့စ်ဘွတ်ထဲက သူငယ်ချင်းဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာကို ပဲ အမွှန်းတင်တတ်…။ ပြီတော့ဘာမှမဟုတ်တာ သူမသိ…။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှ ဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုတဲ့သူများ အောက် လင့်လေးတွေသွားကြည့်ရဲလား သွားကြည့်လိုက်ကြပါဦး …။ ခင်ဗျားတို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေကြကုန်တာ ……. ။ ပွန်းဆိုဒ်တွေတောင်လိုက်မမှီဘူး…။
ဒါက အကင်းပဲရှိသေးတာ….။ ဒီထက်ပိုပြိးဆိုးတာတွေရှိသေးတယ် …။ တစ်ကယ်ပြောတာပါ….။ ကိုယ် ကွန်တက်ထဲက သူငယ်ချင်းထဲက တစ်ယောက်ယောက်လာက်ကများထဖောက်လိုက်ရင် ကိုယ့်အကောင့်ထဲ ရောက်လာပြီသာအောက့်မေ့လိုက် ……….။ နောက်မှ ဖေ့စ်ဘွတ်အကြောင်းဆက်ပြောရဦးမယ်
ကျုပ်လဲထို့အထဲ ထို့အထဲမှ တစ်ယောက်အပါအ၀င် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းးးးးးးးးး
တော်တော်လေးကို စုမိဆောင်းမိ ရှိတာကိုးဗျ
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖို့ အကြောင်း
အခန်းဆက် ဆောင်းပါး/ဝတ်ထု တွေ ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ ဆြာပေ ရှာဖတ်ကြည့်ပါ့မယ် ……။ ကျုပ်တို့ဆီမှာက ဘောလုံးဂျာနယ်ရယ် ဂန္ဘီရ ရယ် ဗေဒင်ဂျာနယ်ရယ် မှုခင်းဂျာနယ်ရယ်ပဲ ရှိတာ ………။ အော် မနက်ဖြန် န၀င်းချောင်းဘေးမှာလုပ်တဲ့ ဂျာနယ်ပြပွဲမှာများ ပါလာမလားမသိဘူး သွားရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်….။ အဆင်ပြေရင်တော့ ” န၀င်းချောင်းနံဘေးက ဂျာနယ် 2000ပြပွဲ ” ဆိုတာလေးတင်ပေးပါဦးမယ်…။ မြို့နယ်လှုပ်ရှားမှုလေးမို့ပါ….။ မှတ်မိဦးမလားမသိဘူး မနှစ်က မေးခွန်းတစ်ရာထုတ်တဲ့ ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက လုပ်တာ …။
(ဒီနှစ်လည်းမေးခွန်းတစ်ရာ အဖြေတစ်ရာ နေ၀န်းနီလက်ထဲရောက်နေပါပြီ…။ ) 25-1-2013 ကနေ 27-1- 2013 နေ့အထိ ပြသထားပြီး အလင်းအိမ်စာကြည့်တိုကို လှူဒါန်းခဲ့မယ်လို့သိရပါတယ်…။ ဂှာနယ်အမျိုးအစားပေါင်း 185 မျိုး အစောင်ပေါင်း 2000 ကျော်ပြသပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်
ကျုပ်ဂျပန်မှာရှိတုံး.. အင်တာနက်ဆိုတာကြီး.. စရတော့.. လူတွေအင်တာနက်နှိုက်ကြတယ်ပေါ့..
အင်တာနက်တက်ရင်.. ဖုံးမိုဒမ်က..ပီပေါ်ပီပေါ်..ကွီကွီ..မြည်ပြီး.. ငါးမိနစ်လောက်မှ.. စာလုံးလေးတွေထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့ပေါ်လာတာ…
လကုန်၇င်.. ဒေါ်လာ ၂ရာလောက်အသာလေးပဲ..။
ဂျပန်တွေ. အဲဒီအင်တာနက်ကို.. ဘာအတွက်အသုံးများကြသလည်းသိလား…
Nude ပုံတွေ. လိင်ဆက်ဆံမှုအသားပေးပုံတွေဗျ…
ကွန်ပျူတာကလည်းမရှိ.. အစောပိုင်းကဆို.. Word pro(word-processor) တွေသုံးရတာ..
အမောင် နေဝန်းနီ ကျေးဇူးနဲ့ အဲလို ဟာတွေရှိတာ သိရကြောင်းပါ..။
ဗဟုသုတ ရသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်…
ဆေးဖိုးထပ်ကုန်ပါက သူကြီးမှ စိုက်ထုတ်ပေးစေလိုကြောင်း…
အဘနီ ပြောတဲ့ ပထမဦးဆုံး Face Book Account ကိုပဲ ဖွင့်လိုက်တာ ၊
” သဘောင်္သားကတော်များ ဆက်သွယ်ပါ ” ဆိုပဲ ။
တစ်ည သုံးသောင်း ဆိုပဲ ။
အော် ၊ သဘောင်္သား ဖြစ်ရတာ ၊
တော်တော် စွန့်လွှတ်ရပါလားနော် ။
တွေးမိတာ တစ်ခုကတော့ ၊
ဒုဿနသော ကို စီးပွားဖြစ် လုပ်စားနေတဲ့ ခေတ် ၊
ဘိုနီ နဲ့ တွေ့ မှ သောကျိုးနည်း ပြောတော့တာကလား
” သောက်ကျိုးနည်း ”
ကိုပေ ပြောမှပဲ ၊ အဘ သတိထားမိသွားတယ် ။
ဒီဟာ ဂဇက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ ၊
အဘ ပထမဆုံး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း စကားလုံး သုံးမိတာဖြစ်မယ် ။
ရွာသူားများကို ၊ တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ် ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တစ်ဦး တစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့ ကို ဆဲရေးတာ ၊ မဟုတ်ရပါဘူး ။
အာမေဋိတ်သံ ( Exclamation ) အသုံးအနှုန်း အနေနှင့် ၊
မထင်မှတ်ပဲ ရုတ်တရက်ပါသွားတာပါ ။
ထောက်ပြတဲ့ ကိုပေ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အမှာစကား စာသားလေလား..။ ။
တစ်ကယ်တော့ အားလုံးလောက်က (ရွာထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေ ) အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်နေတာလေးကို ထောက်ပြရုံသက်သက်ပါ…။ အဲဒိမှာ ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့ ပြောဖို့ အမျိုးအစားတွေ ထုတ်ပြောဖို့ ကျွန်တော်လည်ပါးစပ်မရဲဘူးဗျ….။ သွားကြည့်မိတဲ့ရွာသူတွေကတော့ ကျိန်ဆဲနေသလားမသိဘူး….။ သူကြီးကတော့ ပြောရှာတယ် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတူတူပဲတဲ့…။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေက တစ်ဆိတ် လွန်မနေဘူးလားလို့ ………..။
အင်တာနက်ကို သုံးသူတွေထဲမှာ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးရှိတတ်တယ်
အခု ဦးမာဃတို့က မြန်မာ နိုင်ငံ မှာမို့ မြန်မာတွေကို ပို သတိထားမိတာပါ
တခြား နိုင်ငံ တွေမှာလဲ ရှိပါတယ်
အဲဒီတော့ မရှိမဟုတ် ရှိကိုရှိမှာပါ
သေချာရှာရင် မြန်မာကတောင် နည်းဦးမလားမသိ
ဒါပေမယ့် အထောက်အထားစုံအောင် ပေးထားတဲ့ လင့်လေးတွေ သွားကြည့်လိုက်တာ သုံးရက်လောက် ကြာသွားတယ်
.. မိန်းကလေးတွေ.. အရွယ်ကောင်းတုံး.. ရုပ်ပြစားနိုင်ပြီး.. ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှုမရှိပဲ.. အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဈေးကွက်သစ်ကြီးလည်း..အင်တာနက်ကတဆင့် ဖြစ်လာစေတာပါ..။
အဲဒီအကြောင်းသိချင်.. ကိုရင်နေ့စာ… အပိုင်း၃ရောက်မှ.. ရေးပေးမယ်.. :harr: